Inona no asan'ny fandriana? -Ozinina Alice
Mpanamboatra izay manome serivisy OEM marika marika marika avo lenta
Label tavoahangy metaly
Ny asan'ny fandriana dia manome fahafaham-po ny torimason'ny olombelona isan'andro, mirakitra sy manara-maso ny lanjany, ary ny famolavolana dia mirona ho manan-tsaina.
Misy karazana fandriana efatra amin'ny fanaka tranainy, dia ny fandriana, ny fandriana Arhat, ny fandriana ary ny fandriana Babu. Ireo roa farany ireo dia natao lamba fatoriana fotsiny; raha ny roa voalohany dia manana ny asa mipetraka ankoatra ny torimaso. Misy karazany roa ny torimaso amin'ny teny sinoa fahiny: torimaso be sy torimaso. Ny torimaso be dia midika hoe torimaso ara-dalàna amin'ny alina. Ny nap dia manondro ny torimaso toy ny fiatoana antoandro. Ny fandriana sy ny fandriana Arhat dia ampiasaina amin'ny torimaso ary azo ampiasaina amin'ny fialamboly, raha ny fandriana sy ny fandriana babu dia ampiasaina amin'ny torimaso lehibe. , Tsy azo ampiasaina amin'ny fandraisana vahiny.
Talohan'ny Dinastia Han, ny fomba fiainan'ny Sinoa dia ny mipetraka amin'ny tany, ka ny foiben'ny fiainana dia tsy maintsy manodidina ny toerana fatoriana, ary ny fampiantranoana dia manodidina ny efitrano fatorian'ny tompony. Rehefa nandeha ny fotoana, dia niorina ny fomba fijery ara-jeografika momba ny fampiantranoana ny Sinoa. Talohan'ny tarana-mpanjaka Qing, na dia tany am-piandohan'ny Repoblikan'i Shina aza, dia teo am-pandriana na teo amin'ny kang no avo indrindra amin'ny fandraisana vahiny Shinoa. Ny tena fiasan'ny fandriana sy ny fandriana Luohan dia tsy ny torimaso, fa ny fandraisana vahiny.
Izao no ambara: Avy amin'ny Internet ny atiny etsy ambony, ary ny atiny dia natao ho an'ny fanondroana anao ihany. Raha mandika ny zonao ianao dia mifandraisa aminay ary hofafanay avy hatrany.
Ny takelaka anaram-boninahitra dia manana fampiharana maro be ary hita eny rehetra eny amin'ny fiainana, toy ny feo, kojakoja ao an-tokantrano, vata fampangatsiahana, solosaina, vokatra fiarovana, sns., izay azo ampiasaina amin'ny famantarana. Ary efa 21 taona izahay no nanao sonia anarana, ary manana mari-pahaizana manokana izahay. Izahay (Alice) dia mpanamboatra matihanina amin'ny takelaka anarana fanaka. Afaka mamokatra zinc firaka, aliminioma, varahina, varahina, pvc, sns Ny orinasa dia manana fikarohana sy fampandrosoana feno, famolavolana, famokarana, varotra, serivisy rafitra, zon'ny marika, 5 nasionaly patanty sy ny mari-pamantarana zo, zavamaniry faritra 2.000 square. metatra, ary mpiasa mihoatra ny 100.
Précédent Inona no halavany sy ny sakany ny fandriana-Alice orinasa
Fikarakarana kidoro-Alice orinasa MANARAKA